विद्यामा पुरानै व्यवस्थाको धङधङी छ
प्रत्यासीको नजरमा प्रमुख
प्रदीप बस्नेत काठमाडाैं, १७ बैशाख
‘प्रत्यासीको नजरमा प्रमुख’ शिलापत्रको नयाँ स्तम्भ हो । स्थानीय सरकारलाई रचनात्मक सहयोग पुग्ने अपेक्षासहित सुरु गरिएको यस स्तम्भमा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको काम र शैलीमाथि तत्कालीन प्रत्यासी उम्मेदवारको विश्लेषण प्रस्तुत गर्दछौं । पाक्षिक रूपमा प्रस्तुत हुने यो स्तम्भको पहिलो अंकमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको काम र शैलीलाई तत्कालीन प्रत्यासी किशोर थापाले रचनात्मक सुझावसहित विश्लेषण गरेका छन् । थापा विवेकशील साझा पार्टीबाट उम्मेदवार थिए ।
राजधानी भएकाले काठमाडौं महानगरप्रति देशैभरका नागरिकको चासो र सरोकार जोडिएको हुन्छ । तर, काठमाडौंको स्थिति गौरवयोग्य छैन । सर्वसाधारणका लागि सास्तीको सहर बन्यो । नयाँ व्यवस्थासँगै काठमाडौं महानगरपालिकामा नयाँ नेतृत्व आयो । तर, यसले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन । नागरिकको आशामा तुषारापात भएको छ ।
नयाँ नेतृत्वको एक वर्ष उल्लेख्य उपलब्धिविहीन रह्यो । पाँच वर्षअघि अर्थात् पुरानो व्यवस्थामा जे थियो, अझै त्यस्तै छ । फोहोर, प्रदूषण र अस्तव्यस्तता महानगरको ‘असली परिचय’ बनेको छ । जसकारण, व्यवस्था बदलिए पनि नागरिकले अवस्था बदलिएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत जो जो जनप्रतिनिधिको भूमिकामा छन्, उनीहरुले पुरानो र नयाँबीचको भेद नै छुट्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा स्थानीय निकायकै धङधङी छ । जसबाट महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य पनि उम्कन सकेका छैनन् । यो उनको कमजोरी हो ।
व्यक्तिगत रूपमा भद्र र शालीन लाग्छन् । केही न केही राम्रो काम गरौं भन्ने हुटहुटी पनि छ । तर, परिणाम त्यस्तो देखिँदैन । हुन त एक्लो प्रयासले सफल हुने कुरा पनि होइन । जसका लागि उहाँले राजनीतिक/प्रशासनिक संयन्त्रलाई आफ्नो भिजनअनुसार अघि बढाउन सक्नुपथ्र्यो तर सक्नुभएन ।
मूलतः समन्वयमा उहाँको कमजोरी देखियो । आफ्नै पार्टीको बहुमत भएको संघीय सरकारबाट सक्ने सहयोग पनि लिनुभएन । यो सुन्दर अवसरलाई विद्यासुन्दरजीले गुमाउने खतरा बढ्दो छ ।
घोषणापत्रअनुरूप काम भएन
उहाँले सय दिनमा सय वटा काम गर्छु भन्नुभयो । चुनावका बेला राजनीतिक घोषणा गर्नु र कुर्सीमा बसेर कार्यान्वयन गर्नु फरक हो । चुनाव जित्नकै लागि गरिने घोषणाको के अर्थ ? १० प्रतिशत मात्रै काम गरेको भए पनि महानगरको रूप नै अर्कै हुन्थ्यो । उहाँहरुको ठूलो संगठन छ । चाहेको जति जनपरिचालन गर्न सक्नुहुन्छ । ठूलाठूला आन्दोलन पनि गर्न सक्नुहुन्छ । तर, सुझबुझका साथ कुशलतापूर्वक शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने र पदमा पुगेपछि परिणाम दिने विषयमा उहाँहरु असफल हुनुभयो ।
विकास भावनाले हुने होइन । काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि रहर मात्रै भएर पनि हुँदैन । खुबी चाहिन्छ । नीतिगत सँगै व्यवस्थापकीय र कार्यशैलीको कमजोरीका कारण विद्याजीले अपेक्षाकृत काम गर्न सक्नुभएन । मूलतः महानगरको नेतृत्वमा क्षमतावान् मान्छे नआएका कारण समस्या भएको छ ।
के गर्नुपर्थ्याे ?
काठमाडौंका ३२ वटा वडा कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाइदिनुस् । जनताका धेरै काम वडाबाटै हुन्छन् । जसका लागि विद्याजीले त्यहाँको संरचनागत सुधार र कर्मचारीको सहज व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । उहाँसँग केही राजनीतिक कार्यकर्ता पनि छन् । उनीहरुलाई स्वयं सेवकका रूपमा वडामा खटाउन सक्नुहुन्छ ।
त्यसो गर्दा कर्मचारी अभावका कारण सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको सास्ती कम हुने थियो । कर तिर्न जाँदासमेत हैरानी खेप्नुपर्ने स्थिति अन्त्य नगरी ठूलो कुरा गर्नुको अर्थ छैन । समृद्ध र सुन्दर महानगर बनाउन धेरैले सहयोग गर्छन् । तर, अतिसामान्य व्यवस्थापनमा समेत महानगर मूक दर्शक बनेजस्तो देखिन्छ ।
काठमाडौंः स्मार्ट कि ऐतिहासिक सिटी ?
मोनोरेल र मेट्रोरेलका हावादारी कुरा भन्दा सहरका चोकमा ट्राफिक लाइटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । टोलटोलका सार्वजनिक स्थानलाई पार्कका रूपमा व्यवस्थित गरेर केटाकेटी र बूढाबूढीलाई टहल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । मासिएका काठमाडौंका पोखरीको पुनःस्थापना गरी हराभरा बनाउनुपर्ने हो । वृद्धवृद्धाहरु भत्ता लिन र नियमित स्वास्थ्य चेकजाँचका लागि अस्पताल जान सक्दैनन् ।
यो उमेर समूहलाई लक्षित गरी महानगरमा एउटा घुम्ती सेवा सुरु गर्नुपर्ने हो । विद्यालयहरु नगरको मातहतमा आइसकेपछि यसको व्यवस्थापन गर्न जरुरी थियो । स्कुल बसका कारण अत्यधिक ट्राफिक बढेको छ । बूढानीलकण्ठ बस्ने अभिभावकले ललितपुरको कुनै विद्यालयमा बच्चा पढाउनुपर्ने जरुरी छैन ।
जहाँको बासिन्दा हो, त्यहीको स्कुलमा पढाउने व्यवस्था मिलाइयो भने धेरै हदसम्म सडक व्यवस्थित हुन सक्छ । महानगरले सम्पदा संरक्षणमा नदी र आसपासका क्षेत्रलाई सम्पदा क्षेत्र घोषणा गर्न सक्छ । धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदासँगै ऐतिहासिक धरोहरले भरिपूर्ण छ, काठमाडौं । यसलाई जीवन्त राख्नु महानगरको कर्तव्य हो । तर, विद्याजी स्मार्ट सिटी भनेर हिँड्नुहुन्छ । नागरिकका दैनिकीसँग जोडिएका सामान्य कुरा पूरा गरिदिए धेरै राम्रो हुने थियो ।
काठमाडौंबासीले धेरै कुरा खोजेका छैनन् । पैदलयात्रीले निर्बाध हिँड्न पाऊन् । सवारी साधन प्रयोगकर्ताले सडकका खाल्डाखुल्डीको सामना गर्नु नपरोस् । अपांग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिलाले सजिलै सडक पार गर्न पाऊन् । शुद्ध खानेपानीको सहजता होस् । सडकको सास्ती मात्रै कम भए पनि काठमाडौंबासीले महानगरलाई धन्यवाद दिने थिए ।
वडा कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीको मैत्रीपूर्ण व्यवहार पाइयोस् । यस्तै अतिसामान्य विषय पनि महानगरले किन गर्न नसकेको ? यसका लागि महानगरले संघीय सरकारको पनि सहयोग माग्न सक्छ । यस अर्थमा काठमाडौं महानगरलाई अरू पालिकाभन्दा धेरै अवसर छ । तैपनि, काठमाडौंबासीको औसत अपेक्षासमेत पूरा हुन सकेको छैन । यो दुर्भाग्यपूर्ण सत्य हो ।
आफ्नै दुःख पनि छ
महानगर प्रमुख धेरै शक्तिशाली पद हो । कतै आफ्नै पार्टीको पर्याप्त सहयोग नभएका कारण अप्ठ्यारोमा परेका त छैनन् भन्ने पनि लाग्छ । सँगै वडाध्यक्षसँगको समन्वयमा पनि समस्या भएको देख्छु । कर्मचारी संयन्त्रबाट पनि स्थानीय सरकारले सहयोग लिन सकेका छैनन् । कर्मचारीलाई राजनीति गर्न दिइएको छुटका कारण जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारी बलिया भएका छन् । कर्मचारी बलियो बनाएको पनि पार्टीले नै हो । हेर्दा कर्मचारी हुन् तर आफ्नो पार्टीको राजनीति गर्छन् ।
जनप्रतिनिधिले नीति, नियम र कार्यक्रम ल्याउने हो । कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले हो । तर, जनप्रतिनिधि ठेक्कापट्टा र डोजर चलाउनेतिर लागे । जब जनप्रतिनिधि प्रशासनिक/प्राविधिक काममा लागे तब कर्मचारीले गर्ने काम उहाँहरुले गर्न थाल्नुभयो । कर्मचारीले गर्ने काम जनप्रतिनिधिले गर्न थालेपछि कर्मचारी बेरोजगार हुन्छन् । अनि कर्मचारी नीति र नियम निर्माणसँगै राजनीति गर्न लाग्छन् ।
यसरी एकले गर्ने काम अर्कोले गर्न थालेपछि कर्मचारी आफूअनुकूल नीति बनाउन लाग्छन् । आफूले नीति बनाउने हो र कर्मचारीलाई नेतृत्व दिने हो भन्ने नै जनप्रतिनिधिले बुझेनन् । जसको असर काठमाडौं महानगरपालिकामा पनि परेको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १८, २०७६, ००:४५:००
जंगे शासनको रिहर्सल
अब पनि गाडी नचले व्यवसायी मात्र होइन, बैंक पनि डुब्छन्
निजीले अहिले शुल्क लिन पाउँदैनन्, हामीले राष्ट्रियकरण गर्ने भनेका छैनौँ
निजी विद्यालय अब राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, लकडाउनको शुल्क उठाउन पाइँदैन
आयुर्वेद परम्परा होइन विज्ञान हो, कोरोनासँग जुध्न आयुर्वेद पद्धति अपनाउनुस्
कृषि ज्ञान, बिशेष अन्तरक्रिया शृंखला